Somary hafa kely tsy toa ny mahazatra ny fifidianana ny Filoha Amerikanina.
Etats-Unis moa dia Repoblika Fédéraly nefa kosa régime présidentiel, izany hoe manandanja ny Filoham-pirenena. Misy Etat Fédéral 50 any Etats-Unis, izay isan'ny kintana 50 amin'ny Sainam-pirenendry zareo.
Washington, District de Colombia, district fédéral hivelan'ireo 50 Etats ireo no Capitale Fédérale.
9 833 517 km² ny velarataniny, izany hoe 17 avo eny amin'ny Madagasikara.
320 206 000 no isan'ny mponina ny taona 2015 (15 avo eny noho ny isan'ny Malagasy)
Président: Barack Obama, Démocrate
4 taona ny mandat na ny faharetan'ny Filoha amin'ny toerany.(Mifanandrify amin'ny année bissextile), ary manomboka ny 20 janoary hatrany hatrany, taona maro nifandimby.
Indroa misesy ihany ny Filoha amperin'asa no mahazo milatsaka.
Tsy maintsy feno 35 taona izy, ary teraka tany Etats-Unis ka nonina nandritra ny 14 taona tany.
Maharitra iray taona ny fifidianana.
Tsy mifidy mivantana ny Filoham-pirenena ny vahoaka amerikanina fa mifidy izay solotena na Délégué, suffrage universel indirect.
Nanomboka tamin'ny febroary ka hatramin'ny volana jona 2016, isaky ny antoko politika, isaky ny Etat dia mifidy ny Kandida hiatrika ny fifidianana Filoham-pirenena, ka ny délégué na solotena no fidiana amin'izany, ary ireny délégué ireny indray no mandeha mifidy izay Kandida tokana aroson'ny antoko hilahatra amin'ny antoko andaniny.
Vitsivitsy moa ny antoko politika amerikanina, fa 2 no tena misongadina, dia ny Démocrate sy ny Républicain.
Eo no antsoina hoe primaire, ka misy Etat, ny samy Démocrate na ny samy vahoaka mpifidy izay nisoratra anarana ho Républicain ihany no samy mifidy izay ho Kandida hifaninana farany.
Misy kosa Etat, manaiky ny hifidianan'ny rehetra izay ho kandida ka izay misoratra anarana dia afaka mifidy amin'ny andaniny na amin'ny ankilany.
Ny Démocrate dia nisy kandida 3, ka Hillary Clinton no lanin'ny mpikambana ao amin'ny antoko Démocrate.
Ny Républicain kosa dia nisy kandida 12, ka i Donald Trump no lany, hifaninana.
Rehefa lany ireo Kandida 2 hifaninana ireo dia mirotsaka mifaninana miaraka amin'ny Filoha lefitra izy ireo, na ny Vice-président. (Candidat en binôme)
Aty amintsika premier ministre, fa ny an'izy ireo tsy misy premier ministre fa io Vice-président io, izay fantatra mialoha izany ary voafidy miaraka amin'ilay Filoha-pirenena.
Hillary Clinton sy Tim Kaine ny an'ny Démocrate
Donald Trump sy Mike Pence ny an'ny Républicain.
Hillary moa dia avy ao Chicago
Trump avy any New York
Nanomboka ny volana jolay dia raikitra ny fampielezan-kevitry ny roa tonta ka dia miasa ny serasera sy ny vola.
Tsy misy fetra ambony na plafond moa ny an'izy ireo ny vola ampiasaina, fa misy lalànan'ny mangarahara kosa, ny orin'asa vaventy sy ny lobbying dia afaka manome ankahalalahana ny vola fa misy fitsipika mifehy azy, ary tsy maintsy nandoavana hetra.
Mazava izany fa ny programan'asan'ilay kandida no hisafidianana azy satria miankina amin'izay no tombom-barotr'ilay mpanohana.
Na resaka toe-karena izany, na resaka fifandraisana amin'ny any ivelany.
Ohatra, izay kandida mampiseho ny fitrandrahana solitany dia ahazo ny vaton'ny Texas, satria Etat mpitrandraka solitany ny any. Izay Kandida mandrangaranga ny fitaovam-piadiana dia ahazo ny vaton'ireo indostria mpanamboatra fitaovam-piadiana, izay kandida mampiseho ny fahamboniana sy fifamenoan'ny fahasamihafana dia ahazo ny vaton'ireo mainty hoditra.
Samy manangom-bola izany ny antoko roa mifaninana na avy amin'ny fanomezan'ireo vahoaka mpifidy, na avy amin'ny orin'asa.
632.2 millions de dollars ny an'ny Démocrate no azony.
536.6 millions de dollars kosa ny an'i Républicain.
Ny vahoaka amerikanina ny 8 novambra izao dia mifidy 538 grands électeurs, na mpifidy vaventy, ka ireo 538 mpifidy ireo izany no mifidy ny Filoham-pirenena Amerikanina misolo-tena ny vahoaka 300 tapitr'isa.
99% n'ireo 538 mpifidy vaventy ireo dia mifidy ny fironan'ny mponina misy ny Etat soloany tena. Mijoro tanteraka izany ny tsy fivadibadihana palitao na loko politika any Etats-Unis.
Misy kosa anefa ny mponina ao amin'ilay Etat, no miovaova loko politika, io ilay atao hoe Swing States, na Etats versatiles, ka tsy fantatra be ihany na Démocrate izy ireo na Républicain, ka dia arahin'ny mpanara-baovao akaiky ny safidin'izy ireo satria na vato iray aza dia mikaoty amin'ny 538 mpifidy vaventy.
Swing states, Etats versatiles:
Nevada, Colorado, Iowa, Wisconsin, Michigan, Ohio, Pennsylvanie, Virginie, Caroline du Nord, Floride.
Fa misy kosa ireo Etat izay efa fantatra ny fironany ary tsy miova ara-tantara.
Amin'io 8 novambra io dia maro koa ny fifidianana ataon'ny vahoaka Amerikanina.
Référendum, izay anontaniana ny hevitry ny vahoaka momba ny lalàna samihafa hitondrana ny Etat misy azy, ohatra ny peine de mort, na famonoana ho faty olona iray nanao heloka bevava, lalàna momba ny fanalan-jaza.
Iza no lany ho Filoha
Amin'ireo 538 mpifidy vaventy, dia tsy maintsy mahazo vato 270 vao lany Filoha, raha tsy tratra izany dia ny Chambre des représentants na ny fahefana mpanao lalàna no manendry solotena, iray avy ny Etat tsirairay, ka ireo no manapaka farany.
Rehefa lany ny Filoha, tsy tonga dia mandray ny asany izy, fa misy tetezamita kely eo, fotoana anendreny ny mpiara-miasa aminy, membre de cabinet, ananganany ny governemantany, mazava ho azy fa ny Vice-président izay niaraka lany taminy na ilay Binôme, no miandraikitra izay, secrétaire sy sous secrétaire d'Etat moa ny fiantso azy any fa tsy misy ministre izany, fotoana ihany koa io andrindrany ny mpiasa ao amin'ny Maison Blanche sy ahafantarany ny asa rehetra ao.
Ny 20 janoary, na ny "Inauguration Day" vao miroso amin'ny investiture ny Filoha lany, ka izany dia atao eo anoloan'ny Capitol ao Washington, izay ivotoeran'ny Firenena Amerikanina mihitsy satria ao no iasan'ny Solombavambahoaka sy ny Sénat.
Raha ny ao Washington manokana dia miainga amin'io Capitol io avokoa ny adresin-trano sy ny làlana rehetra, eo no Zero, ka ny any avaratra dia 1-2-3 Nord, ny any atsimo dia 1-2-3 Sud...
Tsy misy trano mahazo mihoatra ny haavon'ny Capitol raha ny ao Washington no resahina, fanamarihana fa ambanin'ny fahefan'ny vahoaka daholo ny rehetra.
Amin'io andro io ihany koa no manao fianihanana sy fametrahana tanana ambonin'ny Baiboly ny Filoha Amerikanina, ary manao ny kabary voalohany izy amin'io.
Propecia Kidney Stones [url=http://cheapviausa.com]viagra[/url] Propecia Canadian Drug Stores
samedi, 01 juillet 2017 20:30